म प्रधानमन्त्री बने भने 1 घन्टामा राजीनामा दिन्छु– माग्नेबुढा -
१६ माघ २०७५, बुधबार ११:४५ January 30, 2019 bikramमनोरन्जन / समाचारNo Comment on म प्रधानमन्त्री बने भने 1 घन्टामा राजीनामा दिन्छु– माग्नेबुढा
मेरीबास्सैमा उनले लामो समय काम गरेका केदार घिमिरे (माग्नेबुढा) हास्य कलाकारितामा स्थापित नाम हो । उक्त कार्यक्रमबाटै उनी माग्नेबुढाका रूपमा स्थापित भए । मेरीबास्सैपछि चलचित्र क्षेत्रमा उनको व्यस्तता सँगसँगै लोकप्रियता बढ्यो । हाल देशका विभिन्न मेला महोत्सवमा व्यस्त रहेका केदारसँग लोकान्तरले कलाकारिताभन्दा बाहिरी प्रसंगमा रहेर छोटो कुराकानी गरेको छ । हाम्रा प्रश्नको जवाफ उनले रमाइलो ढंगले दिएका छन् ।
तपाईंलाई काठमाडौंको धूलोधूवाँ देख्दा कस्तो लाग्छ ?
काठमाडौंको धूलोधूवाँ देखेर धेरै अचम्मचाहिँ लाग्दैन, किनभने त्यही धूलो उड्ने बाटो समेत बनेको छैन कति गाउँमा ! कम्तिमा यहाँ बाटो त छ । ट्राफिक जाम छ, त्यो स्वभाविक हो । यसमा व्यवस्थापनको कमजोरी छ । अहिले पनि कति मानिसको गाडी छैन । तपाईंहामी त गाडीमा चढ्न पाएका छौं । गाडीमा चढ्दा त जाममा परेका छौं । सबै जनाले धेरै गाडी किनेर त जाम भयो । गाडी कसैले नकिनेको भए जाम हुन्थ्यो र ? तर व्यवस्थापनको चाहिँ कमजोरी हो ।
हामी नेपालीको बानी सधैँ सरकारालाई गाली गर्ने मात्रै छ । सरकारलाई गाली गर्ने आफू केही पनि नगर्ने ! घरभित्रको फोहोर झोलामा पोको पारेर ल्याउने अनि कौसीबाट फुत्त एउटा कुनामा अर्काको घडेरीमा फाल्ने अनि सरकारलाई गाली गर्ने बानी छ । यता सरकार पनि कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ । यता यो गर्छु भन्छ, उता त्यो गर्छु भन्छ, तर केही गर्दैन ।
देशको विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण के होला ?
विकासभन्दा सरकारलाई गफ बढी आउँछ । सरकार त मलाई चट्याङजस्तो लाग्छ, धेरै पहिले मिलिक्क गर्ने अनि पछि मात्र आवाज आउने । देशको विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हो । हाम्रो देशको भ्रष्टाचारले जटिल रूप लिइसकेको छ । यस्तो एउटा ट्याब्लेट हुन्थ्यो, जुन खाने मान्छेले भ्रष्टाचार गर्दैन थ्यो भने त्यस्तो ट्याब्लेट नेपालमा एक ट्रक ल्याउन खोज्दा आधा ट्रक त भन्सारमै सकिन्थ्यो ।
अनि देशका कर्मचारी ?
कर्मचारी पनि दुई प्रकारका छन् । एकथरी चाहिँ एकदमै निष्ठावान कर्मचारी छन् । अर्काथरी जागिर पकाउन मात्र अफिस धाउने । अब यति वर्ष बाँकी छ, भन्ने खालका छन् । मेरो बुझाइमा कर्मचारीलाई बिगार्ने बिचौलिया छन् । जस्तै यातायात कार्यालयमा जाँदा त्यहाँ बाहिरै हामी मिलाइदिन्छौं भन्दै बिचौलियाहरू आइपुग्छन् । मालपोतमा गयो, तपाईं सक्नुहुन्न हामी मिलाइदिन्छौं भन्छन् । सबै बिगारेको बिचौलियाले हो जस्तो लाग्छ ।
तपाईं देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने के गर्नुहुन्थ्यो ?
यदि म प्रधानमन्त्री बनेँ भने एक घण्टाभित्रै राजीनामा दिन्थेँ (हाँस्दै) ।
किनभन्दा मैले राजनीतिलाई एकदमै नजिकबाट नियालिरहेको छु । धेरैजना नेताहरूसँग एकदम नजिक पनि छु । नजिक यस अर्थमा छु कि उहाँहरूको गतिविधिलाई नियाल्न, राजनीति कसरी चलिरहेको छ, त्यो जान्न । उहाँहरूबाट कुनै स्वार्थ लिउँ, उहाँहरूबाट आशिर्वाद प्राप्त होस् भनेर होइन । जनताले नेतालाई गाली गर्छन् । उनीहरू गाली गर्नुपर्ने खालकै छन् कि मिलाउँदा मिलाउँदै नसकेका भन्ने बुझ्न पनि म नजिक छु । मैले के बुझेँ भने माथिल्लो तहका नेताले काम गर्न खोजिरहेको हुन्छन्, तर मिलिरहेको हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले त अह्राउने मात्र हो । अह्राउनेले जसलाई अह्राएको हो त्यसले गर्दैन भने त राजीनामा दिने भन्दा अरू के हुन्छ र उपाय ?